Australia oo baadhaysa muuqaal ku saabsan ilmo yar oo ku hanjabaya inuu qaadayo weeraro - Horn Future
Sydney (AFP)- Booliiska Australia ayaa waxa uu ku dhawaaqday maanta oo Axad ah in uu baadhayo muuqaal video ah oo ku saabsan ilma yar oo 8 jir ah oo ah wiil uu dhalay jihaadiga wayn ee caanka ah ee katirsan ururka “ISIL”kaas oo xidhan suun qarxa oo ku hanjabaya in uu dili doono Australian ka.
Muuqaalka la duubay sida muuqata ayaa ah wiilka ugu yar ee uu dhalay Khaled Shuruuff oo noqday bishii February ee la soo dhaafay Australian kii ugu horeeyay ee dhalashada lagala noqdo marka loo eego sharciyada la-dagaallanka argagixisannimada.
Wargeyska “Sunday Telegraph” ayaa sheegay in wiilkan yar dhawaan laga qaaday muuqaaladiisa isaga oo sita 2 bistooladood iyo mindi oo hanjabaad toos ah jeedinaya halka qofka kale oo aanan kasoo muuqan video gan uu waydiinayo “Sideed u dili lahayd Australia?”.
Khaalid Shuruuf oo ka tagay Australia isaga oo ay la socdaan qoyskiisu oo gaadhay dalka Syria 2013,ayaa waxa uu kasoo muuqday warbaahinta sanadkii 2014 kadib markii uu faafiyay muuqaalo uu leeyahay wiil kale oo uu dhalay isaga oo kor u haya madax la gooyay .
Booliiska gobolka( New South Wales) ayaa war uu soo saaray ku sheegay in kooxda wadajirka ah ee la-dagaallanka argagixisannimada ay og yihiin muuqaalka video ga ah ee laga soo duubay Bariga Dhexe ee ku saabsan wiilka yar ee ku kacaya hanjabaada kaas oo ku hadlaya magaca ururka (ISIL).
Waxa booliisku intaa raacay in “Kooxdan wadajirka ah ay baadhitaan ku wado arrinta ku saabsan muuqaalkan la duubay, laakiinse aynan jirin wax halis ah oo gaar ah,iyada oo heerka halista argagixiso ee dalka ee xilligan wali ay dhici karto, “.
Kadib dilkii xaaska Khaalid Shuruuf, Tara Nettleton sida ay u badan tahay sannadkii hore, ayaa waxa hooyadda dhashay oo caruurtan mocooyo u ah ay isku dayday inay dib ugu soo celiso 5ta carruur ah dalka Australia laakiinse tallaabadaas waxa ay ku dhamaatay guul-daro.
Warar hore loo dusiyay ayaa lagu sheegay in Shuruuf lagu dilay weerar lagu fuliyay diyaaradaha aanan duuliyahu wadin sanadkii 2015,laakiinse warbaahinta ayaa shiki ka muujisay mar dambe dhimashadiisa .
Canberra ayaa waxa ay sare u qaaday heerka halista argagixiso bishii September 2014 iyada oo dhaqan galisay sharciyo cusub oo ammaanka ah milay laga cabsi qabo weeraro ay qaadaan xubno ka talo-qaadanaya kooxaha xag-jirka ah sida ururka “ISIL”.
Mas’uuliyiinta Australia ayaa waxa ay ku qiyaaseen 110 ka mid ah muwaadiniinteedu inay u socdaaleen Syria ama Iraq si ay ugu biiraan kooxaha kacdoonka hubaysan ka wada dalalkaas iyada 60 kamid ah xubnahan la dilay.
« Cumar Al-bashiir oo ku eedeeyay gacmo xaasidnimo inay fashilinayaan Koonfurta Sudan	» Waaxda badeedacaha ee Germany oo ka digtay midhaha lagu qureecdo iyo maraqa diyaarka ah